QM oo dalab cusub ka soo saartay doorashada Somalia - Bulsho News
Biyo La’aan Ka Taagan Degmada Xaaji Saalax Ee Gobolka Daad-madheedh
Qarax Khasaaro Geeystay Oo Ka Dhacay Baardheere
QM oo dalab cusub ka soo saartay doorashada Somalia
Muqdisho (Caasimada Online) – Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dhameystirka doorashooyinka golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya, waxayna QM dalbatay in la dedejiyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka.
Sidoo kale qoraalka Qaramada Midoobay waxaa lagu dalbaday in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo.
“Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay soo dhawaynaysaa gabagabada doorashada dhammaan kuraasta Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka, waxayna ku baaqaysaa in si deg deg ah loo soo dhameystiro doorashada Golaha Shacabka oo loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Sabtidii shalay waxaa Dhuusamareeb lagu doortay labadii kursi ee u dambeysay doorashada golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana horay loo doortay labadii kursi ee u horeysay xildhibaanada golaha shacabka.
Dhanka kale guddiga doorashada Somaliland ayaa maanta shaaciyey in toddobaadkan la qaban doono doorashada 9 kursi oo kamid xildhibaanada Golaha Shacabka ee ka soo jeeda gobollada Waqooyi ee Somaliland.
Mashruuc lagu gudayo hal milyan iyo bar oo...
Sooyaalka Abwaan Xasan-Ganey: Wuxuu ka qeybgalay Silsiladii Deelley...
Ralf Rangnick Oo Dajiyay Qorshe Uu Barcelona Uga...
Liverpool Oo Xasuuqday Man United Iyo Salah Oo...
Siyaasiyiin jawaab deg deg ah ka bixiyey tallaabadii...